Wallapop ma shaqeeyo Maxaan sameyn karaa? | Androidsis
Wallapop ma shaqeeyo Maxaan sameyn karaa?
Ignacio Sala | 10/05/2021 18:00 | Codsiyada Android
Wallapop wuxuu noqday midka ugu isticmaalka badan markay timaado iibin wax kasta oo aynaan hadda isticmaalin. Si kastaba ha noqotee, maahan madal had iyo jeer si fiican u shaqeysa marar badanna way joojisaa shaqada ama si qalad ah ayey u qabataa.
Ficil ahaan tan iyo markii la bilaabay, mid ka mid ah dhibaatooyinka had iyo jeer saameynaya barxadda ayaa xiriir la leh dhambaal isku dhafan oo isku dhafan, madal aan munaasabado badan kuu oggolaanayn inaad dirto ama aad hesho farriimo ama markay dirto, ay tahay xilli dambe.
Dhibaatooyinka kale ee caadiga ah, ee la xiriira hawlgalka barxaddan, waa khiyaanooyin, in kastoo in yar oo caqli gal ah, way fududahay in si dhakhso leh loo ogaado alaabadaas kuwa isticmaala qaar ay rabaan inay lacag ku kasbadaan.
Hoos waxaan ku tusaynaa xalka qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee aan ka heli karno adoo adeegsanaya arjiga Wallapop ee aaladaha moobaylka, laakiin maaha iyada oo aan marka hore kugula talin cusbooneysii arjiga noocii ugu dambeeyay ee laga heli karo Play Store.
Haddii Wallapop uu xaqiijiyey in codsigu lahaa a khalkhal amni, waa wax aad u macquul ah in shirkadu ay hor istaagtay adeegsiga arjiyada noocyadii hore si loo xaliyo dhibaatadaas.
In kasta oo terminalkeenna Android sida caadiga ah si otomaatig ah u cusbooneysii codsiyada rakibay, waxay u egtahay inaad adigu fureysay adigoon ogeyn, sidaa darteed waligood dhib malahan inaad hubiso haddii aan cusbooneysiin sugeyno inaan ku rakibo codsigan.
1 Fariimaha lama diro ama ma yimaadaan
2 Codsiga malaha marin internet
3 Koontadayda waa la xanibay
4 Ma heli karo arjiga
5 Waxaan helayaa khalad markaan dhajinayo xayeysiinta
6 Ma soo galin karo sawiro xayeysiiska
7 Ma heli karo tilmaanta sheyga
8 Wax alaab ah lama muujin
9 Xayaysiiskeygii waa la joojiyay
10 Hadaadan xal u helin dhibaatada
Fariimaha lama diro ama ma yimaadaan
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee barnaamijkan, sidaan kor ku soo sheegay, wuxuu la xiriiraa farriimaha, farriimaha, ama aan hadda la soo dirin, qofka qaata uusan waligiis helin ama ay ku lumaan jidka.
Marka laga soo tago dhibaatooyinka caadiga ah ee barmaamijkan nidaamka isgaarsiinta gudaha ee u dhexeeya iibiyaasha iyo iibsadayaasha, waa inaan tagnaa iska tuurista qodobo kale oo taxane ah taas oo saameyn ku yeelan karta howlaha dalabka iyo kuwa inala xiriira, sida qadka internetka oo daciif ah.
Haddii isku xirnaantaadu fiicantahay, iska jooji Wi-Fi isticmaalna xogta moobiilka ama taa beddelkeeda si meesha looga saaro in dhibaatada waxaa kicinaya isku xirkaaga internetka. Haddii mushkiladda weli aan la xallin, ikhtiyaar kale oo ay tahay inaan isku dayno ayaa ah inaan ka dhex galno nooca websaydhka, oo ah nooc webka ah oo aan si caqli gal ah ugu shaqeynaynin nooca moobiilka, laakiin taasi waxay naga caawin kartaa xaaladahaas.
Codsiga malaha marin internet
In kasta oo ay u muuqan karto wax aan caqli gal ahayn, haddana ma jiraan isticmaaleyaal badan oo marka uu Wallapop shaqeyn waayo, aysan ku mashquulin inay hubiyaan ugu horreyn haddii ay leeyihiin qadka internetka.
App Tani wuxuu shaqeeyaa 100% khadka tooska ah, maadaama aysan ku keydineynin xogteena nooc kasta ha ahaadee, kuwa la xiriira badeecooyinka aan iibinno iyo kuwa aan raacno, iyo sidoo kale xogta la xiriirta sumcadeena, tirada waxyaabaha aan soo iibsanay ama iibinay ...
Koontadayda waa la xanibay
Haddii aynaan beddelin lambarka sirta ah ee lammaanahayada Wallapop ee Facebook ama Gmail, waxay u badan tahay in sababo jira awgood waa ladilay ula kac ama shil madal.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa isku day kombiyuutarka iyada oo loo marayo shabakadda Wallapop. Waa suurtagal in isku xirnaanta udhaxeysa serverka iyo arjigu uu fashilmo waqtigaas, marka hadaan ka heli karno shabakada internetka, dhibaatadu kuma xirna koontadeena, laakiin barta lafteeda.
Xaaladdan oo kale, waxa kaliya ee aan sameyn karno ayaa ah sug in dhibaatooyinka la xaliyo taas oo saameyn ku yeelata howlaha dalabka.
Haddii aanaan ka heli karin bogga intarnetka midkoodna, waxaan meesha ka saari karnaa inay tahay cilad farsamo oo ka jirta barxadda, marka waa nalagu qasbi doonaa la xiriir barta, iyada oo loo marayo emaylka support.es@wallapop.com, si loo ogaado maxay ahaayeen sababaha keenay in koontadeena ay ka maqnaato adeeg.
Ma heli karo arjiga
Haddii aad isticmaasho koontada Gmail ama Facebook si aad uga hesho barnaamijkan iyo waxaad dhawaan badashay furaha sirta ah, xalka si aad awood ugu yeelatid inaad markale marin uhesho arjiga markii uu furi waayo, waa inaad ka tirtirto arjiga qalabkeena, dib u rakibto markalena marin u hesho.
Markaad isticmaaleyso koontadayada Facebook ama Gmail, daaqad biraawsar baa furmaya, biraawsar laga yaabo inuu leeyahay keydiyay erayga sirta ah ee aan horey u isticmaali jirnaySidaa awgeed, xalka ugu fiican ayaa ah in la tirtiro arjiga Wallapop oo ay la socoto dhammaan xogta ku keydsan.
Waa inaad xusuusataa in arjiga kuma kaydsano aaladdayada Ma jiro nooc ka mid ah xogta dhammaan maqaallada aan iibka ku hayno, iyo sidoo kale wax yar oo kaydiya xogta koontadayada, kuwa wax iibiya ee aan raacno, qodobbada aan ugu jecelahay ... Dhammaan macluumaadka ku jira Xisaabta Wallapop waxay ku jirtaa server-yada shirkaddan.
Waxaan helayaa khalad markaan dhajinayo xayeysiinta
Wallapop, sida aaladaha kale ee iibinta wax soo saarka, waxay leedahay tilmaamo taxane ah dhammaan isticmaaleyaashu waa inay u hoggaansamaan haddii ay rabaan inay adeegsadaan, tilmaamaha ay adag tahay in qofna akhriyo oo aan ognahay oo keliya markaan dhibaato kala kulanno barxadda.
Haddii arjigu soo celiyo qalad markii aan rabno inaan daabacno maqaal, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa hubinta inaan buuxinnay mid kasta oo ka mid ah qaybaha loo baahan yahay adigoon isticmaalin emojis ama jilayaal qaas ah cinwaanka iyo sharraxaadaba. Haddii aan buuxinay dhammaan aagagga, waxaa suurtagal ah in dhibaatadu la xiriirto, mar labaad, codsiga ama ku xirnaanta server-yada.
Xaaladdan oo kale, waa inaan sii wadnaa sidii aan uga faallooday qaybaha hore. Haddii, xitaa sidaas, isla fariin qalad ah ay sii socoto inay soo muuqato, xalka ugu fudud ayaa ah ka saar barnaamijka, dib u bilow taleefanka, dib u rakib dalabka oo isku day mar labaad inaad soo dejiso sheyga aan rabno inaan iibino.
Ma soo galin karo sawiro xayeysiiska
Dhammaan codsiyada aan ku rakibno aaladdayada Android ee doonaya inay marin u yeeshaan maktabadda sawirkeenna, waa inay, ugu horreyntii, weydiiso rukhsad isticmaalehahaddii kale, waligaa awood uma yeelan doontid inaad geliso waxyaabahaas.
Marka laga hadlayo Wallapop, waa inaan fududeynaa helitaanka maaddaama halkan ay tahay halka aan ka helayno sawirrada sheyga aan dooneyno inaan iibino. Haddii aanaan rabin inaan ku siino, waxaan dooran karnaa isticmaal kaamirada xarunteena iyada oo loo marayo dalabka, nidaam aan sidoo kale horey u oggolaanay.
Si loo oggolaado Wallapop inuu helo kamaradda qalabkeenna iyo albumkeena sawirada, waa inaan aqbalnaa farriinta ay ku codsaneyso. Haddii fariintaas aan la soo bandhigin, maxaa yeelay horay uma aanan siinin ogolaansho, waa inaan marinaa Dejinta - Barnaamijyada - Wallapop oo dhaqaajiso furayaasha u dhigma kamaradda iyo sawirka.
Haddii aan ka daabacayno xayeysiiska kombiyuutarka, waa inaan maanka ku haynaa in barxadda kaliya u oggolow soo dejinta sawirrada ka yar 1MB - 1.000 KB.
Ma heli karo tilmaanta sheyga
Mid kale oo ka mid ah cilladaha guud ee barmaamijkan waxaa la helaa markaan rabno inaan helno sharraxaadda sheyga iyo farriinta “Waxbaa khaldamay”. Tani waa sababta oo ah xayeysiinta ayaa laga saaray iibiyaha, laakiin waxay sii wadaa inay ka muuqato keydka shirkadda.
Macno malahan haddii aad xirto arjiga, dib u bilaw terminal-kaaga, marinka shabakadda, dhibaatadu way sii socon doontaa ilaa laga soo cusbooneysiiyo waxyaabaha ku jira keydka. Dhibaatadani badanaa waxay dhacdaa marka shey dhowaan la tirtiray, taasi waa, daqiiqado kahor.
Wax alaab ah lama muujin
Haddii aan galno arjiga oo aan maqaal la soo bandhigin oo ay la socdaan farriin qalad ah oo la socota, waa a dhibaatada serverka, sidaa darteed xalka kaliya ayaa ah in wax kale la qabto oo la sugo in gogosha mar labaad ay shaqeyso.
Xayaysiiskeygii waa la joojiyay
Sidii aan ku sheegay qaybtii hore, Wallapop wuxuu leeyahay tilmaamo taxane ah oo ay tahay in qof kasta oo adeegsade ah uu u hoggaansamo si looga hortago barxadda ka saar xayeysiiska aan soo dhejino.
Tusaale ahaan, haddii aan rabno inaan iibino iPhone iyo waxaan ku dhejineynaa xayeysiiska inuu leeyahay xabsi, madalku si otomaatig ah ayuu xayeysiiska uga saari doonaa wuxuuna noo soo diri doonaa farriin leh sababaha keenay in barxadda laga saaro xayeysiiska. Waa wax la yaab leh in barxadani aysan u oggolaanayn noocan xayeysiiska ah tan iyo markii la sii daayay iPhone (JAILBILA) uusan sharci darro ka ahayn waddan kasta.
Sida dhibaatadan macquulka ah ee JAILBREAK, waxaan ka heli karnaa kuwa kale oo la mid ah ama ka sii macno daran. Haddii aan isku aragno kiiskaas, waa inaan dib u eegis ku sameyno qoraalka raadi erayga aan dhaafi karin miirayaasha Dib u eegista Wallapop oo ka saar ama ku beddel mid la mid ah.
Hadaadan xal u helin dhibaatada
Qaab aysan isticmaaleyaal badani ogeyn oo badanaa aalad ka dhaqso badan intay nagala soo xiriiraan emaylka, waa iyada oo loo marayo Twitter iyo Facebook.
Kuwo badan ayaa ah shirkadaha u wareejiyay qayb ka mid ah adeegga macaamiisha Twitter iyo Facebook, waayo degdegga ah ee loo maleeyo adoo u oggolaanaya sameynta wadahadal gaar ah oo u dhexeeya labada dhinac iyadoo loo marayo fariimo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Wallapop ma shaqeeyo Maxaan sameyn karaa?
Isticmaalaha waa gubtay dijo
Haddii koontadaadu naafo tahay waad f ****** oo waad laalaadi doontaa, taasi waa soo koobid.
Iyagu KUuma siinayaan sababaha, ma jiro adeeg macaamiil.
Laba koonto ayaa la iga xanibay "xiriir la leh isticmaale aan ka shakisanahay", waa waxa kaliya ee aan gaadhay, kuuma siin karaan macluumaad dheeraad ah "qarsoodi" dartii. Waxba kuuma sheegi doonaan, kumana wargalin doonaan markay joojiyaan koontadaada, laakiin markii la sameeyo wax macno ah malahan waxaad tiriyo ama waxaad sameyso: waa wax aan dib looga noqon karin, waxaad lumisay marinkiina, iibkiina, sumcaddaada, iwm. , oo ma isticmaali kartid isla koontada mar labaad e-maylka, waxay gashaa liiska madow.
Ujawaab Isticmaalka Gubtay
Sida loo soo dejiyo GeForce Hada Android
Cubot X50: si rasmi ah u soo saarista taleefanka casriga ah ee 64 kamarad afar geesood ah